1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ Winner နှင့်ရမှတ်
1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: ဟီလ်တန်တစ်ချန်ပီယံအဖြစ် check လုပ်ပေးပါတယ်
အဆိုပါ 1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း အပျော်တမ်း Harold ဟီလ်တန်အားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ပထမဦးဆုံးပွင့်လင်းဖလားခဲ့သည်တဦးတည်းအရာအချို့အရေးကြီးသောပထမများကိုထည့်သွင်းမယ့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြိုင်ပွဲဆုရ: Harold ဟီလ်တန်, 305
စက်တင်ဘာ 22-23, 1892: ကျင်းပရက်စွဲများ
ပွင့်လင်းအရေအတွက်: ဤပွင့်လင်းချန်ပီယံရှစ်ကစားခဲ့ 32nd အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်းပေါ်မှတ်စုများ
အဆိုပါ 1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်းနှစ်ခုသိသာထင်ရှားသောပထမများ၏ site ကိုဖြစ်ခဲ့သည်:
ဒါဟာ 18 တွင်းချင်းစီ၏လေးကျည်ကျော်ကစားပထမဦးဆုံးသိသာဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲရှိ၏
ဒါဟာပထမဦးဆုံးဖွင့်ပါ Muirfield မှာကစားခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ဖွင့်လှစ် (နှင့်ဒီခေတ်အများစုသည်အခြားလေဖြတ်-ကစားပြိုင်ပွဲ) တနေ့ခြင်းတွင်ကစား 36 တွင်းရှိကြ၏။ အဆိုပါ 1892 ပွင့်လင်းနှစ်ရက်ကျော်လေးကျည်အတွက်ကစား 72 တွင်းကို, ကိုဆနျ့။
Muirfield, ဆဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပွင့်လင်း rota ယနေ့ 1892 ခုနှစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကခဲ့ - ဒီချန်ပီယံယခင်သာကိုးလဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာ Edinburgh ဂေါက်သီး၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်နှင့် Muirfield ဟာပွင့်လင်း rota အတွက်ကုမ္ပဏီဟောင်းအိမ်, 9-ပေါက် Musselburgh Links များ၏အရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဆုရှင်အပျော်တမ်း Harold ဟီလ်တန်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ဟီလ်တန်ရဲ့နှစ်ခုဗြိတိန်ပွင့်လင်းအောင်ပွဲ (သူလည်းအနိုင်ရခဲ့၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် 1897 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း ) ။ သူလည်းလေးအနိုင်ရသည်, မိမိဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးအပျော်တမ်းကျန်ရစ် ဗြိတိန်အပျော်တမ်း နှင့်တဦးတည်း ကိုအမေရိကန်အပျော်တမ်း ချန်ပီယံ။
ဟီလ်တန်၏ဒုတိယခဲ့ အပျော်တမ်း အတွက်ပွင့်လင်းအနိုင်ရ။
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပထမ - ယောဟန် Ball ကို - ဒီနေရာသုံးခုလေဖြတ် (စန္ဒီဟာ့နှင့် Hugh Kirkaldy နှင့်အတူချည်ထား) ကဟီလ်တန်မှအပြေးသမား-up, ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အပျော်တမ်း, Horace Hutchinson ဟီလ်တန်ထက်ခုနစ်ခုလေဖြတ်ပိုကောင်း 152 မှာ 36-ပေါက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Hutchinson နောက်ဆုံးနှစ်ခုကျည်အတွက် 86 နှင့် 80 ရမှတ်များမှမြင့်တက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး 72 - - ဟီလ်တန်, အတောအတွင်းအဆိုပါပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးရမှတ် carded ဒုတိယအရပ်သို့ရွှေ့ဖို့တတိယပတ်ပတ်လည်, Ball ကိုနောက်ကွယ်မှတဦးတည်းအတွက်။
ဟီလ်တန် Ball ကို, ဟာ့နှင့် Kirkaldy သုံးခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးစီးဖို့, အတူတူနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်တစ်ဦး 74 ၌အခြားသောဒဏ်ငွေရမှတ်ထားတော်မူ၏။
အဆိုပါ 1892 ဗြိတိန်ပွင့်လင်းဂေါက်သီးပြိုင်ပွဲကနေရလဒ်တွေကို Gullane အရှေ့ Lothian, စကော့တလန် (က-အပျော်တမ်း) တွင် Muirfield မှာကစား:
တစ်ဦး-Harold ဟီလ်တန် 78-81-72-74--305
တစ်ဦး-ယောဟနျသ Ball ကို 75-80-74-79--308
ဘင် Sayers 80-76-81-75--312
ဝီလီ Fernie 79-83-76-78--316
Archi Simpson 81-81-76-79--317
တစ်ဦး-Horace Hutchinson 74-78-86-80--318
တွမ် Vardon 83-75-80-82--320
အင်ဒရူး Kirkaldy 84-82-80-75--321
တစ်ဦး-ရှမွေလသည် Mure ဖာဂူ 78-82-80-82--322
ဒါဝိဒ်သည် Anderson ကဂျူနီယာ 76-82-79-87--324
တစ်ဦး-ဖြစ်သူ Robert T. Boothby 81-81-80-82--324
aF.A. မျှမျှတတ 83-87-79-76--325
ဝီလျံ McEwan 79-83-84-79--325
WD ပို 87-75-80-84--326
တစ်ဦး-Freddie ထိုက် 81-83-84-78--326
ဒေါက်ဂလပ် McEwan 84-84-82-79--329
တစ်ဦး-Ernly ဘလက်ဝဲလ် 79-81-84-86--330
တစ်ဦး-Leslie Balfour Melville 83-87-80-81--331
ဂျက် Simpson 84-78-82-87--331
ဒါဝိဒ်သည် Grant က 85-82-84-83--334
အဲလ်ဘတ် Tingey 84-83-81-86--334
တစ်ဦး-ဒါဝိဒ်သည် Leitch 85-88-79-84--336
Walter က Kirk 87-82-84-84--337
aJ.M. Williamson 88-82-82-85--337
aL.S. အန်ဒါဆင် 93-85-81-81--340
AJ ။ မက်ကူလော့ 85-84-90-85--344
ယောသပ်သည် Dalgleish 88-88-81-88--345
တစ်ဦး-ယောဟနျသ LOW 84-93-83-86--346
aE.M. Fitzjohn 88-94-84-84--350
ဒါဝိဒ်သည် Clark က 91-93-88-87--359
ဂျော့ခ်ျ Sayers 89-94-87-89--359
aA.H. Molesworth 91-89-87-93--360
တွမ် Chisholm 90-93-90-90--363
တွမ်မောရစ် Sr; 91-90-91-92--364
တစ်ဦး-Ernest Lehmann 100-86-91-90--367
Fred သည် Fitzjohn 105-95-83-89--372
2015 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: ဂျော်ဒန် Spieth အားဖြင့်နောက်ထပ်သမိုင်း-လုပ်ခြင်း
PGA Tour FedEx စိန့်ယုဒ Classic
ဂျက် Nicklaus '' မာစတာ Finish
အဘယ်ကြောင့် LPGA ANA က Inspiration Winners အဆိုပါရေကန်ထဲမှာဤနေရာသို့သွားရန်
နိမ့်ဆုံး PGA Tour Vardon ဒိုင်းဆုအမှတ်ပေး Averages
PGA Vardon ဒိုင်းဆု Winners
Web.com ခရီးစဉ်အချိန်ဇယား: အဆိုပါ 2018 ရာသီ Rundown
ဂျေကိုးလ်၏ Amazing Bland
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Warren Hard
ဘုရင်မအန်းရဲ့စစ်ပွဲ: Deerfield အပေါ် RAID
အဆိုပါရုပ်ရှင်စစ်မှန်သောပွဲများအပေါ်အခြေခံပြီး '' ပိုင်သောမြေ '' ဖြစ်သနည်း
Réaliser - စုံလင်, အောင်မြင်ရန်; နားလည်သဘောပေါက်ရန်
UCF GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Edith Wilson က: အမေရိက၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်?
တစ်ဦး ketchup အစုံလိုက်သုံး packet Cartesian ထူးခြားသောအ Make ရန်ကဘယ်လို
ဓာတ်ခွဲခန်း Glassware ကိုရှင်းလင်းနည်း
လိုက်ဖက်မှုမုဒ် (သို့မဟုတ်မဟုတ်) တစ်ဦး 's Page View မှ Internet Explorer ကိုမရမကလုပ်နည်း
စပါးစိုက်ပျိုးချိန်များအတွက် Pecan သို့မဟုတ် Hickory Nut စုဆောင်းပြင်ဆင်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လိုသိဓာတုဗေဒသင့်အသက်တာကို Save နိုင်ပါစေ